Madheshvani : The voice of Madhesh - अदालतको भर छैन : डा. भट्टराई
अदालत भएपनि ढुक्क हुन सकिने अवस्था नरहको उनले बताए । यद्यपी संसद पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा प्रेस नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. भट्टराईले अदालतको भर नभएकाले जनस्तरबाट निरन्तर दबाब दिनुपर्ने बताए । देश अस्थिरता र प्रतिक्रान्ति तर्फ जाने डर भएकाले यो कदमलाई तत्काल सच्चाइहाल्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देश डरलाग्दो अवस्थामा जाने खतरा रहेको भन्दै यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमको सडक आन्दोलनबाट सच्चाउनुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए ।
‘संसद पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, बैशाखमा चुनाव पनि हुँदैन, डा. भट्टराईले भने,‘नेपाली जनताका लागि सहज अवस्था आउँदैन ।’ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संकटकाल लगाउन सक्ने पनि उनले दाबी गरे ।
डा. भट्टराईले देशलाई गृहयुद्धबाट बचाउन र सरकारको प्रतिगमन कदमका विरुद्धमा अन्य दलसंग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा जान आफूहरु तयार रहेको बताए ।
गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै दलहरु एक भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने उनको धारणा छ । संयुक्त आन्दोलनका लागि नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड–नेपाल समूहसंग कुराकानी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालसहितका नेतालाई भेटेर आन्दोलनमा जानुपर्ने बताएको पनि उनले जानकार दिए । ‘अहिलेको बेला संसद् पुनःस्थापना गरेर अगाडि बढ्नु हो,’ उनले भने ।